Himalaya Dainik » सुशांतको निधन भएको एक महिनापछि जब उनकी प्रेमिका रिया बोलिन्….
सुशांतको निधन भएको एक महिनापछि जब उनकी प्रेमिका रिया बोलिन्….
बलिउड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतको मृत्यु भएको करिब एक महिना पश्चात उनकी प्रेमिका भनिएकी रिया चक्रवर्ती एक ट्वीट गरिन्। उक्त पोष्टपछि उनिमाथि गा’ली बर्षियो। उनले ट्वीट मार्फत सुशांत सिंह राजपूतको मृत्युबारे सिआइबि जाँचको माग गरेकी थिइन् ।
रियाले गृह मन्त्री अमित शाहलाई यो कुरा ग’म्भीरताका साथ लिन र सीबीआईद्वारा अनुसन्धान गराउन आग्रह गरेकी थिइन्। एक महिना सम्म चुपचाप बसेकी उनको यस किसिको ट्वीट एक किसिमको ‘तरंग’ नै पैदा गर्यो। एक महिना पछि उनले यस्तो माग किन गरिन् भन्ने प्रश्न उब्जियो।
सामाजिक संजालमा रिया ट्रोल र आ’लोचनाको शि’कार भइरहेकी छन्। एक महिना सम्म सुशान्त बारे नबोल्न उनलाई कसले रोक्यो भन्ने सुशांतका प्रशंसकहरुको प्रश्न छ।
महेश भट्टकै आग्रहका उनले त्यस्तो ट्वीट गरेको आ’रोप
उनि निर्देशक महेश भट्टसँगको सम्बन्धलाई लिएर पनि उनी आ’लोचनाको तारो बनिरहेकी छन्। महेश भट्टले सुशान्तको ‘अवसान’ पश्चात दिएको अभिव्यक्तिसँग जोडेर पनि रिया माथि आ लोचना भैरहेको छ। भट्टले सुशान्तले कुनै दिन अ’प्रिय कदम उठाउन सक्छन् भन्ने आफूलाई पहिला नै लागेको बताएका थिए। भने रियाको रियाको महेशसँग नाम समेत जोडिनुका साथै केहि तस्बिर समेत सार्वजनिक भएका थिए ।
सिआइबि जाँचको माग गरेकी रिया माथि ‘नाटक’ गरेको आ’रोप लागिरहेको छ। सुशान्त बारे केहि नबोलेको भन्दै रियाको आ’लोचना भएका कारण देखावटीका लागि उनले यस्तो माग गरेको आ’रोप छ। महेश भट्टकै आग्रहका उनले त्यस्तो ट्वीट गरेको आ’रोप पनि उनी माथि लागिरहेको छ। सुशान्तको निधनमा रियाको केहि न केहि भूमिका हुन सक्ने भन्दै उनी माथि अनुसन्धान गर्न माग उठिरहेको छ।
हरेक बर्ष अमिताभ बच्चनकी छोरीलाई किन पत्र लेख्छन् आमिर खान ?